Magaaladda Bosaso oo Laga Furay Garoon kubada Cagta ah [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Kooxda uu hoggaaminayey Cismaan Turaabi ee guuleystay
Waxaa xalay si rasmi ah looga furay magaaladda Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xarun Cayaareed oo ka kooban garoon kubada cagta ah iyo qeyb Jimicsiga loogu talagalay.
Furitaanka xaruntan Cayaareed ayaa,waxaa ka qeybgalay Madax ka tirsan dawladda,ganacsato ,dhalinyaro.haween iyo marti sharaf kale.
Mulkiilaha xarunta Puntland Finess Center Cabdullaahi Sheekh oo ka hadlay furitaanka ayaa sheegay iney uga goleeyihiin sidii dhalintu u sameyn lahayd Isdhexgal isla markaana helaan goobo kubada lagu Cayaaro casri ah.
Mudane Cabdullaahi Sheekh ayaa sheegay in garoomo kan lamid ah horay uga soo sameeyeen magaaladda Garoowe ee caasimada Puntland xili mid kan dhigiisa ah Todobaadkan xariga laga jaray.
Kooxda laga guuleystay ee u hoggaaminayey Axmed Jookar
Wasiir Kuxigeenka Dekedaha,Gaadiidka badda iyo la dagaalanka Burcadbadeedka Cabdillaahi Aadan Ciise Toohe oo kubadii u horaysay laadaya ama furay garoonka ayaa soo dhaweeyey xaruntan,Isagoona ganacsade Cabdullaahi Sheekh ugu hambalyeeyey hawsha uu qabtay.
Sidoo kale,wuxuu xusay in goobahan oo kale dhalinyarada ka hor Istaagaan Tahriibka isla markaana u tahay madadaalo.
Cayaartii ugu horreysay ee lagu daahfuro garoonka ayaa,waxaa loo qabtay Laba kooxood oo Suxufiyiinta gobolka Bari ah,waxaana kala watay Weriye Cismaan Turaabi iyo Weriye Axmed Jookar halka Maxamed Deeq Cabdalla ahaa Tababaraha guud.
Cayaarta oo ahayd mid aad u xiisa badneyd ayaa guushu raacday Kooxda dharka Huruudiga ee u watay Suxufi Cismaan Turaabi taasoo ka dhalisay kooxda kale 4-3 gool.
Si kastaba garoonka uu furay ganacsade Cabdullaahi Sheekh ayaa noqonaya kii afaraad uu ka hirgeliyo deegaanada Puntland waana mid si weyn loogu ammaanay dadaalkiisa bulsho.